Pep Guardiola oo ka hadlay wararka Raheem Sterling la xiriirinaya Real Madrid – Gool FM
(Manchester) 22 Feb 2020.Tababaraha kooxda kubadda cagta Manchester City ee Pep Guardiola ayaa ka hadlay wararka Raheem Sterling la xiriirinaya inuu ku biirayo naadiga Real Madrid.
Pep Guardiola ayaa si cad u qirtay in xiddig kasta ay xiiseeneyso Real Madrid ay dhibaato weyn ku tahay kooxda uu ka tirsan yahay, isagoo sheegay inay ka walaacsan yihiin suurtogalnimada uu Raheem Sterling ugu biiri karo garoonka Santiago Bernabeu.
Guardiola ayaa wuxuu sharraxay in xaalada ay ku adkaaneyso koox kasta marka Real Madrid iyo Barcelona ay xiiso ka muujiyaan inay la soo wareegaan xiddig ka tirsan safkooda, madaama ay yihiin kuwa ugu fiican taariikhda iyo kuwa ugu soo jiidashada badan.
Wargeyska “Daily Mirror” ee dalka England ayaa wuxuu shaaca ka qaaday jawaabta uu ka bixiyay Pep Guardiola kaddib markii su’aal laga weydiiyay mustaqbalka Raheem Sterling waxaana uu yiri:
“Kooxaha oo dhan waa inay ogaadaan in marka ay Real Madrid ama Barcelona albaabka u garaacaan si ay kagala soo wareegaan ciyaartoy, waa inay gariiraan, sababtoo ah waxay la kulmi karaan dhibaato yar”.
“Barcelona iyo Real Madrid waxaa laga yaabaa inay yihiin labada koox ee ugu xoogan marka loo eego taariikhda iyo tayada ay leeyihiin, tani waa wax iska caadi ah waana fahamsanahay taas”.
“Laakiin waxaan aragnaa dadaalka weyn uu bixinayo Raheem Sterling kulamada uu nala ciyaarayo, waa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican adduunka, waa wax iska caadi ah inay isagu xiiseeyaan kooxo kale”.
“Ma aqaano in Real Madrid ama Barcelona ay la xiriireen wakiilkiisa, laakiin shaki iigama jiro diirad saaridiisa kooxda laga bilaabo maalin koowaad ilaa hadda”.